Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Dennis Bergkamp Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma Dennis Bergkamp anyi na agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinaụlọ, nwunye (Henrita Ruizendaal), Web site Life, Net Worth na Personal Life.
Na nkenke, anyị na-enye gị akụkọ ihe mere eme nke Football Legend mara aha ya; "Onye Na-adịghị efe Dutch". Lifebogger malitere Bio a site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na Arsenal.
Ee, onye ọ bụla maara banyere akụkọ ihe mere eme ya na Arsenal mana ole na ole na-ele Dennis Bergkamp Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Dennis Bergkamp Nwatakiri Akụkọ - Mmalite na Ezinụlọ:
Dennis Nicolaas Maria Bergkamp mụrụ na 10th nke May 1969 na Amsterdam, Netherlands. Amuru ya nne ya, Tonnie Bergkamp na nna, Wim Bergkamp (onye eletrik). Bergkamp bụ onye ikpeazụ nke ụmụ anọ Wim na Tonnie Bergkamp.
A zụlitere Dennis n'otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, n'ime ezinụlọ na-achọ iru ọkwa nke etiti. Nna ya, onye ọkụ eletrik na onye na-agba ọsọ na ndị na-amakarị egwuregwu na-akpọ aha ya maka nsọpụrụ Scottish Denis Law nke dị n'okpuru.
Iji rube isi na omenala omenaala Dutch, etinyere "n" ọzọ na aha nna Bergkamp nke nna ya mgbe onye na-edeba aha anaghị anabata ya.
E bulitere Bergkamp dịka Roman Catholic site na ezinụlọ ya ma na-agachi ụka anya oge ọ bụ nwata. Ọ bụ ezie na n'afọ ndị sochirinụ ọ sịrị na ịga ụka anaghị amasị ya, Bergkamp ka na-ekwusi okwukwe ya ike. Dabere na Bergkamp, ​​onye egwu bọọlụ nwata ya bụ Glenn Hoddle, onye ọ masịrị maka mmetụ ya dị nro.
Dennis Bergkamp Biography - Ọrụ na Nchịkọta:
Enwetara Bergkamp site na usoro ntorobịa Ajax, sonye na klọb mgbe ọ dị afọ 11.
Ọ mụtara ntụgharị uche n'ọhịa ebe ọ bụ na ha aghaghị ịmụta igwu egwu ọ bụla. Ya na-agbachitere nyeere ya aka mgbe ọ matara n'ụzọ doro anya otú otu onye na-emegide ya ga-esi gbalịa ịkwụsị ya. Ihe omuma a ga - enyere ya aka igbochi ihe obula onye na - agbachitere ya nwere ike ime. Nke ahụ, ya na ihe okike ya na-enweghị ngwụcha, mere ka ọ bụrụ onye siri nnọọ ike na-eche nche.
Na oge ndị ọzọ, Bergkamp guzobere onwe ya dị ka onye egwuregwu mbụ na Ajax. Nke a mechara bụrụ oge ịga nke ọma maka klọb ahụ, nke meriri aha Eredivisie na oge 1989–90 maka nke mbụ n’ime afọ ise.
Ya na Ajax nọrọ ruo '93, mgbe ọ kpebiri na ọ chọrọ ibuli elu nke otu egwuregwu ọ na-egwuri egwu na imegide. Andtali na Serie A bụ ndị siri ike na mgbe ọ nwụsịrị, ọ họọrọ Internazionale Milano karịa Juventus. Ọ bụghị ihe dị mma n'ihi na ndị mgbasa ozi Italiantali amaghị ihe ọ ga-eme maka omume iwebata ya n'ọhịa wee kpọọ ya “Enweghị mmasị.” Ha enweghị obi ebere mgbe ụfọdụ ịkwa ya emo.
Tits T T T T plus T T T you T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Tits plus T T T T plus T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T plus Tits T plus T T T T plus T plus Tits you T Tits you T T T T T T T T you T T T T you T T T T plus T T T T T T plus T T T T T Tits T T T T you you T T T T T T T T T T T T T T T T Tits T plus T T T T T T T T T you T T T plus T T T T T T T T T Tits T T T T T T T T T T T T T plus
Ọnye na-bụ Henrita Ruizendaal? Dennis Bergkamp's WIfe:
Ná mmalite nke ọrụ ya, ọ bịara pụta ìhè na ụdị ọ bụla nke ụkwụ ụkwụ Dennis Bergkamp chọrọ onye kwesịrị ekwesị iji mee ka mkpebi ya sie ike. Nwanyị mara mma ma dị ebube mejupụtara nkà ya nke football. Ọ dịghị ihe ọzọ karịa ụkpụrụ Dutch, Henrita Ruizendaal, ịhụnanya maka ndụ ya.
Bergkamp ama ọdọ Henrita Ruizendaal kemgbe 16 June 1993. N'okpuru ebe a bụ foto nke agbamakwụkwọ ha.
Di na nwunye ahụ nwere ụmụ anọ: Estelle Deborah, Mitchel Dennis, Yasmin Naomi na Saffron Rita. N'okpuru ebe a bụ nwa mbụ Dennis Bergkamp.
Nwa Dennis Bergkamp bụ onye ọkpụkpọ nwere ọgụgụ isi n'onwe ya mana ọ dị ka ọ na-ewere ụzọ dịtụ iche na egwuregwu karịa nna ya, bụ onye debanyere aha na Ajax mgbe ọ dị afọ 12. Mitchel kpebiri ịmalite ọrụ ya site na ọkwa nke abụọ nke Dutch football. Ọ nọ na njedebe nke ịbanye n'ime ọdụ ụgbọ elu nke football.
Dennis Bergkamp Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu - Ọdịdị ewu ewu:
Anyị akwadebewo stats LifeBogger Popularity maka Denis Bergkamp. Biko lelee anya n’okpuru ma ọ bụrụ na ọ dabara n’ihe ị chere banyere ya.
Dennis Bergkamp Ndụ Nke Onwe:
Dennis Bergkamp nwere àgwà na-esonụ na àgwà ya.
Ike Ya: Onye nwere ike ịdabere na ya, onye nwere ndidi, onye nwere ike ime ihe, onye nwere obi ụtọ, onye nwere ọrụ na nke siri ike n'ime ezinụlọ ya.
Omume Ya: Aviophobia (egwu nke ife na helikọpta, ụgbọ elu na ụgbọ elu ndị ọzọ)
Ihe Dennis na-enwe mmasị: Ọ hụrụ ogige, nri, egwu, ịhụnanya, uwe elu na-arụ ọrụ aka.
Ihe Dennis achọghị: Ọ na-achọ enweghị nchebe nke ụdị ọ bụla,
Na nchịkọta, Dennis bara uru, nwee ezigbo ntọala ma bụrụ onye na-achọ ịghọrọ mkpụrụ nke ọrụ ya. Ọ na-eche na ọ dị mkpa ka ịhụnanya na ịma mma gbara ya gburugburu nke ndị ezinụlọ ya na ndị na-akwado ya nyere ya. Dennis nwere mmetụta nke anụ ahụ ma na-emetụ n'ahụ ma na-ele aka na uto dị ka ihe kachasị mkpa nke uche ya. Ọ dị njikere ịtachi obi na ịrapara na nhọrọ ya ruo mgbe ha ruru afọ ojuju onwe onye.
Dennis Bergkamp Aviophobia Akụkọ nke:
Aha otutu Bergkamp bu "Onye Na-adịghị efe Dutch" n'ihi egwu ọ na-atụ ife efe. Nke a sitere na ihe mere na ndị otu mba Netherlands na 1994 World Cup ebe injin nke ụgbọ elu ahụ gbutere n'oge ụgbọ elu, na-akpali onye nta akụkọ ka ọ bụrụ ihe ọchị banyere inwe bọmbụ na akpa ya. Mgbe ihe a mechara, Bergkamp kpebiri na ya agakwaghị ada ọzọ kama ọ na-achọ ịchọrọ enyemaka aka ike psychiatric:
Enwere m nsogbu a ma aghaghị m ibi na ya. Enweghị m ike ime ihe ọ bụla banyere ya, ọ bụ ihe gbasara uche na enweghị m ike ịkọwa ya. Enweghị m ụgbọelu n’ụgbọelu ruo afọ abụọ. Ndị Dutch FA nwere ọmịiko, ya mere Arsenal, ruo ugbu a. Ana m atụle enyemaka psychiatric. Enweghị m ike ife efe. Ana m akpụkọta. Ickjọ na-atụ m.
Ọnọdụ ahụ kpagburu ike ya ike igwu egwuregwu asọmpi na asọmpi European na ịga na ndị otu mba. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ ga-eji ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè na-agagharị n'elu ala, mana nchịkọta nke ụfọdụ egwuregwu nwere nchegbu dị ukwuu na ya agaghị aga njem.
Dennis Bergkamp Bio - Ezumike ezumike nká:
Ọ lara ezumike nká na 2006 ma webata ya n'ime Ụlọ Nzukọ Egwuregwu Bekee n'afọ na-esote. Ọ bụ nnukwu nsọpụrụ ebe ọ bụ na ọ bụ onye mbụ egwu Dutch ka a ga-eme ya. FIFA na-ahọrọ ya n'ime ndị kacha elu 100 n'oge niile na Arsenal na-ahọpụta ya NỌ 2 n'etiti otu narị otu narị ndị ịgba egwu.
Mgbe ọ kwụsịrị ịla, Bergkamp siri ọnwụ na ọ gaghị akwaga n'ịkụzi. O weghaara ihe a choro iji choo Arsenal ma tinye uche na njem ma soro ndi ya na ya noo.
Otú ọ dị, n'April 2008, ọ malitere akara uzo ọkwọ ụgbọala ọsọ ọsọ maka ndị na-agba ọsọ nzọụkwụ nke ndị Netherlands na ndị na-arụ ọrụ na Ajax. Mgbe emechara Coach Betaald Voetbal ma were ọtụtụ ọnọdụ nchịkwa, a kpọrọ Bergkamp onye enyemaka De Boer na Ajax na August 2011.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Dennis Bergkamp Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Bọchị gbanwee: Mee 7, 2021